Madaxweynaha Madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza oo Dagaal ugu Hanjabay Ciidanka Midowga Africa | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Madaxweynaha Madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza oo Dagaal ugu Hanjabay Ciidanka Midowga Africa
Madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza ayaa ku hanjabay inuu dagaal la geli doono Ciidamada nabad ilaalinta ee Midowga Afrika dalkaas u soo diri doono, si loo joojiyo colaada galaafatay boqolaalka ruux.
Horaantii bishan ayaa Midowga Afrika ku dhawaaqay inuu ciidamo u diri doono Burundi, si ay u bad baadiyaan dadka rayidka, kadib qalalaaso muddo bilooyin socda oo ka dhashay markii Madaxweyne Nkurunziza bishii April ee sanadkan ku dhawaaqay in mar saddexaad xilka u tartamayo.
Madaxweyne Nkurunziza oo la hadlayay raadiyaha dowladda ayaa sheegay inay la dagaalami doonaan Ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika hadii ay ku soo xadgudbaan xuduuda, isagoo yiri “Qof kasta waxaa uu leeyahay ixtiraam”, sida xuduuda Burundi.
“Haddii ay dhacdo in ay ku xad mabaadi’da kuwa, oo aad dalka soo weerartaan, waa ka jawaabi doonaa, qof walba oo Burundia ah wuxuu u istaagi doonaa inuu idinla dagaalamo”ayuu yiri Madaxweyne Nkurunziza.
Madaxweynaha Burundi ayaa dib loo doortay bishii May ee sanadkan, kadib doorasho muran dhalisay, isla markaana uu wax ka bedel ku sameeyay dastuurka dalkaas oo dhigayay in aan mar saddexaad u tartami karin madaxtinimada dalkaas.
Boqolaal ruux ayaa ku geeriyooday rabshadaha ka taagan dalkaas tan iyo bishii April, iyadoo bishan kaliya wadooyinka caasimada Bujumbura lagu arkay meydadka kontameeyo ruux.
Bisha soo socda ayaa lagu wadaa in dowladda Burundi iyo kooxaha mucaaradka inay ku kulmaan magaalada Arusha ee dalka Tanzania, si loo soo afjaro qalalaasaha.